septembre 2017 - Page 79 sur 79 -
Fanafihana teny Ampitatafika : Jiolahy efatra nalefa eny Tsiafahy
01/09/2017 admintriatra 0
Nalefa avy hatrany eny Tsiafahy ireo efa-dahy, isan’ireo atidoha nikotrika ireo fanafihana sy fandrobana niseho teny Ampitatafika, taorian’ny fihainoana azy ireo teo anatrehan’ny fampanoavana omaly. Teny Ampitatafika sy Imerintsiatosika izy ireo no voasambotry ny zandary …Tohiny
Nidina ifotony nanao tombana ny fivoaran’ny ezaka momba ny ady tamin’ny tsy fanjarian-tsakafo nihatra tamin’ny mponina tany atsimon’ny Nosy tamin’iny taon-dasa iny ny iraky ny Firenena Mikambana sy ny solontenan’ny masoivohon’ny Japon ary Norvège. Nanatrika …Tohiny
Nitrangana hain-trano mahatsiravina indray teny mahavoky, omaly hariva tokony ho tamin’ny 07 ora tany ho any. Trano hazo tsy latsaky ny 80 tafo no indray lasa lavenona vokatr’izany. Ankoatra ireo trano hazo ireo, dia nisy …Tohiny
KMMR : Tsy itokisana ny Ceni
Mbola manjavozavo be ihany. Izay no azo ilazana ny fanangonam-bokatra tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena, fihodinana voalohany notanterahina ny 7 novambra teo. Hatramin’izao mantsy maro ireo miahiahy amin’ny vokatra avoakan’ny vaomiera mahaleo tena mikarakara ny fifidianana, na ...Tohiny
Filohan’ny antenimieran-doholona : « Tsy hihemotra intsony ny datim-pifidianana »